Warbixin Xaqiiqa ah oo BBc ka Diyaarisay Caruurta Afkooda Hooyo laga lumiyo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Warbixin Xaqiiqa ah oo BBc ka Diyaarisay Caruurta Afkooda Hooyo laga...
Warbixin Xaqiiqa ah oo BBc ka Diyaarisay Caruurta Afkooda Hooyo laga lumiyo
Carruurta qaar ee ku soo kora qaaradda Afrika ee lagu qasba iney afka Ingiriisiga oo keli ah ku hadlaan ayaa la sheegay inuu jiritaankooda lumo.
Qoyska Khahliso Amahle Mytaza waxay ka soo jeedaan magaalada Suweto ee ku taalla Johannesburg halkaasi oo looga hadlo afafka Sotho, Xhosa iyo Zulu.
Bulshada ay ka soo jeeddana waxay ku hadlaan afafkaasi midka ay doonaan iyaga oo hadaba luuqadda qofka uu kula hadlo u beddesho.
Balse Khahliso marka ay billawday waxbarashadeeda dugsiga hoose waxay qoyskeeda u guureen xaafad magaaladaasi ka mid ah oo ay ku badan yihiin dadka caddaanka ah.Afka Ingiriisiga ee aan aadka ugu hadli jirin marar badan ayaa la iigu caayey, iyo aqoon la’anta iga haysata sida loogu dhawaaqo ereyada qaarkood,” ayey tiri mar ay BBC u warrantay.
Waxaa jira carruur kale oo madow ah oo ku jiray dhibaato la mid ah iyaga oo aan dooneynin iney xiriir la sameysteen carruurta kale oo aan afka Ingiriiska ku hadlin.
Gabadhan 17 jirka ah waxay tiri: “Si aan u barto Ingiriisiga waxaan isku milay carruur caddaan ah. Mana dooneyn inaan carruurta madowga ah raaco. Runti wey adkeyd.”
“Marka aan hooyadey u raco maqaayadaha oo ay dadku maqlaan iney ku hadleyso afafka Xhosa iyo Sotho, waxay markiba qaadanayaan go’aan ah inaan awoodin inaan iibsanno cuntooyin qaaliga ah.”
“Kaddib marki ay maqlaan aniga ama walaalkeey oo Ingiriis ku hadleyna, gaar ahaanna walaalkeey waxaad arkeysaa dadki oo noo riyaaqaya aadna noo soo dhaweynaya.”
Dugsiyada waxbarashada Nigeria intooda badan waxay dhigaan manhajka Britain
Waxayna sheegtay iney waalidkeeda ka hor istaageen afka Pidgin, oo ah af si weyn looga hadlo dalka Nigeria.
“Haddii anoo daawanaya TV aan arko afka Ingiriiska lahjadda Pidgin ku lifaaqan oo aan u jawaabo ama isku dayo inaan u jawaabo waalidkeyga dhibaato ayaan kala kulmi jiray,” ayey tiri.
Iyaga oo aaminsan: “Ingiriisia inuu yahay afka ugu mudan in lagu hadlo”.
“Aniguna aad ayaan ugu faanayey inaan afka Ingiriiska ugu hadlo sida aan hadda ugu hadlayo.”
Balse marka ay da’deedu gaartay 15 jir waxay marki ugu horreysay la kulantay ayeeydeed waxayna ku guul darreysatay iney la hadasho oo ay ku hadasho luuqad ay ayeeydeed fahmi karto.
“Waa markaa marka aan garawsaday iney dhibaato weyn tahay. Ayna tahay caqabad ila soo deristay.”
Anigu ma madow baan ahay?’
Khaliso waxay sheegtay xiriirka ay la leedahay afkeeda hooyo ayaa isbeddelay maadaamaa ay hadda ku fiican tahay ku hadalka afafka Sotho iyo Xhosa.
Waxayna awoodi weysay iney ku hadasho luuqad fasiix ah iyada oo aan ku dhex darin ereyo Ingiriisi ah, iyada oo arrintaa ku tilmaantay “Afka Ingiriiska inuu guumeystay”.
Khahliso waxay rumeysan tahay in xaaladdeeda iyo tan Amaka ay ahayn wax caadi ah.
“Carruurta madowga ee ka soo jeeda qoysaska dhaqaalahooda uu dhexdhexaadka yahay waxay ku kentaa jiritaanka qofka oo lumo: ‘Mana awoodo inaan ku hadlo afkeyga hooyo.’
“Waxaan nafteyda ku qasbay inaan barto. Ma madow baan ahay mar haddii aan ku hadli kareyn afki aan aslka u lahaa? Ma madow baan ahay mar haddii aan afafkeyga hooyo ee Sotho, ama Zulu, ama Tonga aan ku dhihi karin Hooyo ‘waan ku jecelahay,’?
Amaka haatan waxay ku howlan tahay sidi ay jiritaankeeda u soo ceshan lahayd iyada oo billawday afka Igbo iyo dhaqanka qowmiyadda ay ka soo eeddo ee Igbo iyada oo adeegsanayso filimaanta iyo heesaha.
“Afka wuxuu qofkaa siinayaa dareen buslho inuu yeesho,” ayey tiri.
Qaaradda Afrika waxa looga hadlaa ku dhawaad 2,000 oo luuqadood hase yeeshee waddamada Afrika intooda badan waxay ku hadlaan oo luuqaddooda koobaad u ah afafka Faransiiska iyo Ingiriisiga oo ay guumeystayaasha ka dhaxleen una horseeday afkoodi hooyo iney ka haajiraan.
Carruurta caqliga badan oo keli ah ayaa afka Ingiriisiga ku hadla’
Ghana, oo sida Koonfur Afrika iyo Nayjeeriya oo kale ay Britain soo guumeystay, waxaa ku baahay aragtidaa, ayuu yidhi Ronald oo ah bare wax ka dhiga dugsi sare oo ku yaalla miyiga oo isna naga codsaday in aan la isticmaalin magaciisa saxda ah.
Harar – magaaladii u dambaysay ee tagsiga Biijootka buluugga ah adeegsata
“Waxaa jira fikrad khaldan oo ah in carruurta caqliga badani ay yihiin kuwa ku hadla Ingiriisiga. Xitaa waalidiinta aan waligood wax baran waxay isku dayaan inay carruurtooda ku qasbaan inay si fiican ugu hadlaan Ingiriisiga.
“Waxaanna garanayaa dad tira badan oo aan Ghana meelna uga bixin oo aan ku hadli karin af Ingiriisiga waxa aan ka ahayn,”
Manhajka waxbarashada Ghana waxaa lagu dhigaa afka Ingiriisiga
“Haddii aan ardayda su’aal weydiiyo, qaar ka mid ah waxay iigu jawaabayaan: ‘Mudane, Jawaabta waan garanayaa, balse af Ingiriisi kuma sheegi karo.”
Khahliso waxay sheegtay iney hadda dooneyso iney dib ugu laabato dhaqankeeda iyo afkeeda hooyo ayna u soo jeedsanayso barashada luuqadda.
“Bulshada aan ka soo jeedo si aan ula midoobo waa inaan bartaa afkeyga hooyo mana aha inaan joojiyo barashada ku hadalka afafka Xhosa iyo Sotho.”
Previous articleGudida Doorashada Ethiopia oo dib u dhigay doorashii mudaysnayd, sababtana way sheegeen
Next articleWafti Miisaanleh oo Jabuuti usoo dirtay ka qaybgalka 18 may; madaxwaynahayaga ismaaciil ayaa nasoo diray ,waxanahay labo dal oo walaalo ah